Redmi K20: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida rasmiga ah | Androidsis
Redmi K20: Nooca ugu sarreeya ee bartanka ayaa hadda rasmi ah
Ku xigta K20 Pro waxaan ka helnaa taleefan kale dhacdadan soo bandhigida ee sumadda Shiinaha. Waxay ku saabsan tahay Redmi K20, tusaale ah toddobaadyo badan waxaan u maleynay inay tahay dhamaadka-dhamaadka, in kasta oo ugu dambayntii ay tahay moodelkeeda heerka dhexe. Wax in aad ayaanu u naqaanay dhawaan cimilada. Telefoonkani wuxuu leeyahay dhinacyo badan oo la mid ah qaabka Pro ee sumadda Shiinaha ay ku soo bandhigtay dhacdadan.
Naqshadeynta waa isku mid kiiskan. Sidaa darteed, Redmi K20 wuxuu la imanayaa kamarad hore oo shaashad ah, shaashad aan si dhib yar u laabanayn sidoo kale waxay leedahay saddex kamaradood oo gadaal ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu kala duwan yahay ayaa ah isticmaalka processor-ka taleefanka. Laakiin isbedelada waa yar yihiin labada u dhexeeya.
Heerka dhexe ee udambeeya waa qeyb waxbadan kortay ilaa sanadkii hore. Noocyo badan oo ku saabsan Android ayaa soo bandhigay moodooyin ku jira qaybtaan. Sidoo kale Redmi hadda wuxuu nooga tegayaa moodal leh karti badan oo ku jirta. Intaa waxaa dheer, waxay la timid qiimo weyn oo lacag ah.
1 Tilmaamaha Redmi K20
Tilmaamaha Redmi K20
Heer farsamo waan arki karnaa taas tan 'Redmi K20' waxay leedahay dhinacyo badan oo ay wadaagaan oo leh qaab-heer sare ah oo isla xafladda lagu soo bandhigay. Naqshadeynta ayaa isku mid ah, oo leh shaashad isku mid ah, kaamirooyinka iyo batterigeeda. Isku-darka RAM iyo kaydinta ama processor-ku way ku kala duwan yihiin kiiskan. Kuwani waa tilmaamaha telefoonka:
Screen: 6,39-inch AMOLED leh FullHD + oo ah 2.340 x 1.080 pixels iyo Isdhaafsiga 19.5: 9
GacaliyeQalabka: Qualcomm Snapdragon 730
Kaydinta Gudaha: 64/128GB
Cámara trasera: 48 MP leh fur f / 1.75 + 13 MP oo leh aperture f / 2.4 Super Wide Angle + 8 MP oo leh aperture f / 2.4 telephoto
Kaamirada hore: 20 MP
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie oo leh MIUI 10
Batariga: 4.000 mAh oo leh 27W Fast Charge
Xuduudaha kala duwan: 4G, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 5.0, GPS Dual, nooca USB C, 3,5 mm Jack
kuwa kale: Akhristaha faraha faraha shaashadda hoosteeda, NFC, Furashada wejiga
Cabbirada: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm
Redmi K20-kan ayaa noqonaya mid ka mid ah taleefannada ugu horreeya suuqa ee leh Snapdragon 730. Waa mid ka mid ah processor-radii ugu dambeeyay ee ka socda Qualcomm, processor-kaaga cusub ee premium-dhexdhexaad ah. Processor-kan waxaa loogu talagalay ciyaaraha, si taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ahi u leeyihiin awood ku filan, iyo sidoo kale maareyn batteri oo wanaagsan, si ay ugu awoodaan inay ku ciyaaraan habka ugu fiican. Batariga, sumadda Shiinaha waxay u adeegsaneysaa sida ugu dambeysa, oo leh awood dhan 4.000 Mah. Waxaan sidoo kale leenahay Android Pie oo ah nidaam hawlgal dhalasho ahaan.
Kaamirooyinka ayaa la mid ah kuwa aan ku aragnay dhamaadka-sare. Marka waxaan haysanaa kamarad gadaal seddex ah, 48 + 13 + 8 MP. Intaa waxaa dheer, kamaradda 48 MP ayaa adeegsaday aaladda 'Sony IMX586 sensor'. Tani waxay ka dhigan tahay in qalabku leeyahay kamarad dhab ah oo 48 MP ah, taas oo shaki la'aan kuu oggolaan doonta inaad sawirro waaweyn ku qaadatid. Redmi K20-kan wuxuu kaloo adeegsadaa dareeraha faraha ee shaashadda, kaas oo bilaabaya inuu joogitaan ku yeesho bartamaha muddada, marka lagu daro furitaanka wajiga. Sida casriga casriga ah, waxay sidoo kale leedahay NFC si loo bixiyo lacagaha moobaylka.
Sida ku dhacday taleefanka kale, tan 'Redmi K20' waxaa horey loogu soo bandhigay Shiinaha. In kasta oo illaa iyo hadda aan wax macluumaad ah ka haynin bilowga caalamiga ee taleefanka. Waxaan rajeyneynaa inay jiri doonaan warar ku saabsan arrintan dhowaan, hubaal ka timid Xiaomi. Laakiin waa inaan sugnaa arrintan.
Qalabka waxaa lagu soo saari doonaa seddex midab ilaa dukaamada: casaan, buluug iyo madow. Inta aan leenahay laba isku-darka, oo ku kala duwan qadarka keydinta. Qiimaha labadan nooc ee Redmi K20 ee Shiinaha horay ayaa loo muujiyay. Marka waxaan heleynaa fikrad ku saabsan waxa aan ka filan karno telefoonka:
Nooca leh 6/64 GB waxaa lagu bilaabay qiime dhan 1999 yuan (259 euro isbeddelka)
Moodelka leh 6/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 2099 yuan (272 euro qiimaha sarifka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi K20: Nooca ugu sarreeya ee bartanka ayaa hadda rasmi ah
Samsung waxay soo saareysaa daabacaad gaar ah oo ah Galaxy S10 + Olympic Edition
Redmi K20 Pro: Dhamaadkii ugu dambeeyay ee sumadda